“के को महान ? भ्रष्टाचारी नेता हुन गिरिजा” :: NepalPlus
“के को महान ? भ्रष्टाचारी नेता हुन गिरिजा”
निकै समय भएको थियो अमेरिकी लेखक मित्र डेभिड रिडसित कुराकानी नभएको । नेपालको अवस्थालाई उनले कसरि हेरिरहेका छन् ? हालै अमेरिकी राष्ट्रपती बाराक ओबामाले ल्याएको स्वास्थ्य योजनाबारे उनको धारणा के छ ? अब कहिले नेपाल जान चाहन्छन् ? आफ्नै केहि कामको योजना बारेपनि उनीसित छलफल गरौं जस्तो लाग्यो । मैले छोटो इमेल लेखें । केहि दिनभित्रै फोनमा कुरा गरौंला भन्दै उनले लामो मेल पठाए । खुल्दुली थियो मलाई, बाँचुन्जेल जिवनका अधिकांश समयमा गाली खाएर उत्तरार्धतिर ताली पाएका गिरिजाबारे उनले के भन्लान् भन्ने । उनले गिरिजा कुनै महान ब्यक्ति होइनन् भन्दै पठाए ।
कसैलाई लाग्न सक्छ- त्यो अमेरिकीले के जान्दछ नेपालबारे भन्ने । तर त्यसो होइन । डेभिड साँच्चै जान्दछन् नेपालबारे । किनभने उनले नेपालबारे किताब नै लेखेका छन् । किताबपनि सारा बिदेशीका लागि नेपालको धर्म, संस्क्रिति, ईतिहास, राजनीति, जनजाती, भाषा, कुन ठाउँ कस्तो, घुम्ने ठाउँहरु साराका सारा जानकारि दिने । उनले नेपालका हिमाल बाहेक अधिकांश ठाउँ पैदल घुमेका छन् । थुप्रै नेपाली नेतालाई भेटेका छन् । नेपाललाई दुई दशकदेखि नियालीरहेका छन् । त्यसैले उनी नेपालका बारेमा हामी भन्दा धेरै जान्दछन् ।
नेपालमै हुँदापनि हामी धेरै विषयमा छलफल गरिरहन्थ्यौं । मलाई सम्झना छ, उनी गिरिजालाई रुचाउँदैनथे । अहिलेपनि उनले गिरिजाको त्यस्तो कुनै महान देन देखेका रहेनछन् देशकालागि । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको म्रित्युको बारेमा उनले न्युयोर्क टाईम्समा आलेख पढेछन् । पत्रीकामा गिरिजालाई एक महान नेता, महान राष्ट्रपिताका रुपमा चर्चा गरिएको रहेछ । त्यस्तो राष्ट्रपीता जसले मुलुक पुरै उल्ट्यायो खराबबाट असलतिर । अर्थात गतिलो काम गरेर । माओवादी जनयुद्दलाई अन्त्य गराउन प्रमुख भूमिका खेल्यो । उनी भने त्यसमा सहमत हुन सकेनछन् ।
उनी धेरै कुरा जान्दछन् । तरपनि खोइ त्यति जान्दिन भन्दै लेखेका छन्- गिरिजाले सायद पछिल्ला वर्षहरुमा केहि राम्रा काम गरे होलान् । तर मलाई सम्झना छ कि उनी केहिपनि होइनन् । उनी एक भ्रष्टाचारी नेता हुन् ।” डेभिडले योपनि भने-माओवादी जनयुद्द शुरु हुने अवस्था स्रिजना गर्नेपनि उनै हुन् । बहुदलिय कालको बेथितीहरु भित्र्याउने उनै हुन् ।
अमेरिकी राष्ट्रप्ती बाराक ओबामाको जति वाहि वाहि बाहिर देखिन्छ, सुनिन्छ त्यो खासै केहि होइन रहेछ भन्नेपनि लाग्यो उनका कुरा सुनेपछि । ओबामाले खासै केहि गर्न सकेका छैनन् अमेरिकी भावना र चाहना अनुसार भन्ने सुनाए उनले । अमेरिकी राजनीतिलाई ख्यालठट्टा (जोक) भनेका छन् । “अमेरिकी राजनीति पो के कम छ र ? जोक त हो नी ! ओबामा एक सफल बोलक्कड हुन् । बुशको ठाउँ उनले लिनु पक्कैपनि सुधार हो । तर उनले हामीलाई आवश्यक परेको कुनैपनि परिवर्तन गरिरहेका छैनन्” ।